Maxkamadda ICJ oo Soomaaliya u xukuntay inta badan dhul-badeedkii ay isku hayeen Kenya : Calanka.com
Maxkamadda ICJ oo Soomaaliya u xukuntay inta badan dhul-badeedkii ay isku hayeen Kenya
Maxkamadda Caalmiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, ayada oo diiday doodda ugu weyn ee Kenya ee aheyd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka.
Doodda labada dal ayaa aheyd, ayada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku astaysayn xuduudda badda, halka Kenya ay dooneysay in xariiqda lagu saleeyo loolka.
Maxkamadda ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. Sida ka muuqata xariiqda cusub, inta badan dhul-badeedkii ay sheegatay Kenya waa la diiday, waxaana loo xukumay Soomaaliya. Hase yeeshee inyar ayaa sidoo kale laga reebay dhul-badeedkii ay sheegatay Soomaaliya, oo ka billaabata kadib 12 mile xariiqda tooska ah ee ku aadan xuduuddda dhulka.
Dhul badeedkii la isku hayey ayaa dhan 100,000 oo isku wareeg KM ah.
Dowladda Kenya ayaa horey u sheegtay in aysan u hoggaansami doonin go’aanka Maxkamadda. Kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guul-darreystay isku day ay ku dooneysay in wada-hadal lagu dhameeyo kiiska.
Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadii 2014, xilligii uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Farmaajo oo madaxtooyada ku qaabilay guddigii Soomaaliya ee kiiska badda: SAWIRRO
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay Guddiga Soomaaliya ee Kiiska Baddeena ayaa ku… Read More ›
UK: Soomaali loo xiray kiiska xildhibaankii shalay mindida lagu dilay
Booliska UK ayaa fal argagixiso ah u aqoonsaday dilka loo geystay xildhibaan ka tirsanaa xisbiga Conservative-ka oo lagu magacaabi jiray… Read More ›
Mareykanka oo magdhaw siinaya ehelada dad ay duqeyn ugu dileen Afghanistan
Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa Jimcihii sheegtay inay ka go’an tahay inay magdhaw siiso qaraabada10 qof oo lagu dilay weerar khaldamay… Read More ›
NORWAY: Nin qaanso iyo fallaar ku dilay 5 ruux, qaar kalena ku dhaawacay
Waddanka Norway shan qof ayaa dhimatay, laba kalana waa ay dhaawacmeen kaddib markii uu dadkaasi weerraray nin adeegsanaya qaanso iyo… Read More ›
Maxkamadda Caalmiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, ayada oo… Read More ›
CONTACT: [email protected] - About Us